Deg Deg:–Xiisad Cakiran Oo Ka Dhex Qaraxday Dalalka China iyo Cannada – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:–Xiisad Cakiran Oo Ka Dhex Qaraxday Dalalka China iyo Cannada
Waxaa sare usii kaceysa xiisada u dhaxeysa dalalka China iyo Canada kadib markii ay booliiska Canada todobaadkii hore xidheen haweenayda maalqabeenka ah ee Meng Wanzhou oo ka tirsan mulkiilayaasha shirkada weyn ee Huawei oo laga leeyahay China.
Kiiska haweenaydan ayaa weli horyaal maxkamada Canada oo maalin kahor damiin 7 milyan oo dollar ah kusii deysay Ms. Meng Wanzhou. Maraykanka ayaa ku eedeeyey shirkada Huawei inay jabisay xayiraadii saarneyd dalka Iran iyagoo ganacsi qarsoodi ah la-lahaa xukuumada Tehran.
Michael Kovrig ayaa la sheegay inuu hawlo shaqo uu u joogay dalka China. Waxaa maanta oo Jimce ah soo baxaya xog kale oo sheegaysa inay dowlada China xabsiga dhigtay muwaadin labaad oo u dhashay dalka Canada.
Previous Post: Deg Deg Daawo Sawiro:-Wararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Baydhabo
Next Post: Deg Deg Daawo Vdeo:-Isim Mar Loo Xidhay Taageerada Farmaajo Oo Mar kale Weeraray Gaas,